Kushambadzira muTough Real Estate Musika | Martech Zone
Kushambadzira muTough Real Estate Musika
Svondo, Zvita 21, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Uchishandisa matekinoroji epamhepo se nzira Zvekutengesa chinhu chinokura. Vatengi vari kuwedzera kungwara pamusoro pekushandisa vezvenhau kubatsira kuti vadzidzise pachavo pakutenga sarudzo.
Ndiine musika weimba pano uye munyika mune marara, zvinongoitika kuti vese Real Estate vamiririri nevatengi vari kutsvaga kutenga vatanga kushandisa iyo Internet kuita mutsauko. Ndakatenga ndikatengesa dzimba dzinoverengeka munguva yakapfuura ndikaziva nekukurumidza kuti kutsvaga mumiririri chaive chisarudzo chakanakisa chatati tamboita! Yakachengetedza mhuri yangu zviuru zvemadhora uye yakaita kuti zvese zvifambe nyore.
DoorFly imusika pamusika unoremekedzwa vatengesi vezvivakwa vanowana mukana wekushanda nevatengi vekumba. Vatengi vanosangana vanobudirira vakanyoreswa real estate vamiririri avo vanobatsira mukutenga imba maitiro uye vanozovapa iwo mabhadharo.
Dzvanya kune ino post kana iwe usingaoni vhidhiyo iri mashandiro anoita DoorFly!
Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezvekuti zano iri rakazadzikiswa sei paDhooFly blog. Chinhu chikuru nezveDhooFly ndechekuti inoshandira vese mutengi wemba uye mumiriri wezvivakwa. Mumusika uyu wakaomarara, ndine chokwadi chekuti svikiro rinogona kubatanidza izvo zviviri riri kudiwa zvakanyanya!
Ini ndakasangana neboka reDoorFly mumwedzi mishoma yapfuura uye vari kufara nezvebhizinesi nemukana wekuvhara iri gaka muindasitiri yezvivakwa! Ndiri kutarisira kuona yavo diki yekutanga ichibuda!
Indianapolis inoita kunge yakanaka musika wekutanga weReal Estate tekinoroji! Pamwe na DoorFly, zvakare kune:
URBaCS - URBaCS ndeyewebhu-yakavakirwa pikicha yekushandisa iyo varidzi vedzimba vanoshandisa kugovera yavo yekuvaka chiitiko neshamwari uye nhengo dzemhuri.
Kubatana Nharembozha Real Estate SMS - Chishandiso chekutungamira chizvarwa chishandiso chinoshandisa ese mameseji mameseji uye akabata mahara emahara manhamba kuona kuti ruzivo rwekumba rwunogara ruripo kune vanotarisira vatengi.
Imwe yekambani inoshanda imwe niche muReal Estate asi ese iwo anopa musika mhinduro dzakasiyana dzinobatsira mukutyaira kutengesa kumba!
Tags: apuro chigadzirwa kuiswafacebook tabombosaassmmssocial media management systemwayaframing maturusi
Inguva Yekupfeka Pane Yako Hondo Hondo
Dec 22, 2008 pa 10: 20 AM
Kungoita zvakanaka - ndakatarisa Doorfly kuti ndione zvavanopa. Parizvino, muIndiana, vane vamiririri vatanhatu vanokumbira mutengi mumwe chete. Mutengi anoda kutenga imba yemadhora makumi mana uye mutengo wepamusoro i$6., izvo zvandinofunga zvinoreva kuti mumiriri wepamusoro anoda kudzoreredza kana kudzosera madhora mazana mashanu. yebasa ravo.
Dambudziko randinaro neiri, mumiririri haazive kumberi kuti komisheni yake ichava yei.
Kuzivisa: Makomisheni haana kuiswa uye anogara achitaurirana.
Ndakaona dzimba zhinji dzine mabhanga dzichipa mari yakatarwa yekomisheni. Muchiitiko ichi, ngatiti vanopa 3% kana $1200.00. Pamwe, vanongopa $1000.00. Chero zvazvingaitika, mumiriri akapa inenge hafu yekomisheni yavo asingatomboziva kuti mangani maawa avachaisa mari. Ini handitendi kuti ndiko kudyara kwehungwaru kwenguva kana hunyanzvi hwehunyanzvi.
Ini ndinovimbisa mutengi akanaka anogona kutaurirana dhiri iri nani kune mutengi wavo kupfuura $500. kunze kwekomisheni kana kunyange makumi mashanu muzana ekomisheni pamadhora mazana matatu ezviuru. kumba. Haisi nguva dzose ine chekuita nemari - asi sevhisi uye hunyanzvi hunofanirwa kutarisirwa nemunhu.
Muenzaniso - chii kana ndikataurirana 3% kune yekuvhara mari uye chikamu cheiyo chinoshandiswa kutenga pasi mubereko ne.5%. Pane iyi $40,000 pamba, ndakachengeta mutengi wangu $200.00 pagore mukufarira chete.
Kune mienzaniso yakawandisa yekudzivirira nekusimudzira vatengi vako kufarira kwekutengesa zvivakwa kuti vapinde muno, asi ndatenda nekundibvumidza ma 2 cents angu. 🙂
Zvita 22, 2008 na1:33 PM
Mhinduro yakanaka, Paula!
DoorFly iri kushanda yakananga kubva pashoko remuromo izvozvi kuti ibve pasi, vanhu vakanaka ipapo vatangisa izvi vachishanda nguva yakazara - zvinokatyamadza asi zvichatora nguva kuvaka mhepo yakawanda.
Ini ndiri fan hombe yekuhaya mumiririri, uye semakwikwi uye sarudzo inounzwa kumusika. Handifunge kuti DoorFly iri kushambadzira yese padivi rekubhidha - ndezvekubatanidza maajenti akakodzera kune vatengi chaivo veimba chaiyo.
Ndinofunga kuti muenzaniso mukuru. Inopa vatengi sarudzo uye vamiririri vane svikiro kuti vabatane nevatengi vatsva - chimwe chinhu chiri kushomeka mazuva ano!
Mazororo anofara uye ndinokutendai nemhinduro yenyu!
Dec 23, 2008 pa 12: 45 AM
Ndatenda nelink rudo. Tinofara nezve 2009 nekuti tiri kuona vavaki vedzimba vachipinda munhandare yesocial media. Vazhinji vavaki vari kutanga kublogi, tweet uye kushandisa masosi seFacebook neFlickr. Kunyangwe 2009 ingangove ine husimbe maererano nekutengesa kutsva kwemba isu tinotarisira kuona vavaki vachiramba vachisvika kune midhiya mitsva.